Manjaro 21.0.4 inosvika ichivandudza mapakeji, asi kwete GNOME 40 | Linux Vakapindwa muropa
Manjaro 21.0.4 inosvika ichivandudza mapakeji, asi GNOME 40 haisi pakati pavo
Panguva ino vaita zvinopesana. Shanduro nyowani dzakagadzika dzeiyi Arch Linux-based operating system inowanzo svika kune vashandisi varipo pakutanga wozoisa iyo ISO mifananidzo. Nhasi, zvirokwazvo maminetsi apfuura, ayo e Manjaro 21.0.4, uye panguva yekunyora mitsara iyi haisati yasvika kune vedu vatove nehurongwa hwakaiswa. Nguva yakatarwa padivi, vhezheni itsva yakagadzikana yave kuwanikwa, sekuziviswa mumusangano yepurojekiti.
Kubva pane zvatinoverenga mune runyorwa rwezvinhu zvitsva, izvi hazvisi kuzodzika munhoroondo seimwe yezvinonyanya kufarirwa kuburitswa, sezvo iyo GNOME edition ichienderera neShell 3.38 uye ivo vasina kugadzirisa iyo KDE edition nePlasma 5.21.5. Zvichava zvinonakidza kune avo vanoisa isina huremu desktop, nekuti ivo vakawedzera LXQt 0.17.0 kune avo matura. Pazasi iwe une zvakasara zve nhau izvo zvasvika neManjaro 21.0.4.
Pfungwa dzeManjaro 21.0.4
Vakagadzirisa akawanda ezviyo, asi iyo 5.9 nhevedzano yabviswa.
LXQt 0.17.0 inowanikwa.
Mazhinji mapakeji eGNOME akagadziridzwa kuva v40.1. Asi, sezvatakataura, hapana munhu anofara zvakanyanya, nekuti izvi zvinongokanganisa mashandisiro. Iyo Shell inochengetwa pav3.38.
VirtualBox yakagadziridzwa kuita 6.1.22.
Mamwe maratidziro kubva kuna Deepin.
Zvakajairika kugadzirisa, senge Python naHaskell.
Manjaro 21.0.4 ISO mifananidzo Ivo varipo paCDN77, uye ichakurumidza kuoneka pa peji rekurodha peji. Tiri kutaura nezvekugovera neRolling Release modhi yekuvandudza, saka vashandisi varipo vanofanirwa kuona mapakeji matsva akamirira senge yekuvandudza chero nguva.
Kana zvakadaro vachaita riini kusvetukira kuGNOME 40 Zvakare muShell, chinhu chega chinozivikanwa ndechekuti ivo vari kutozviyedza mumavhezheni asina kugadzikana, saka vashandisi veiyo vhezheni vhezheni vachazofanira kuva nemoyo murefu zvishoma.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Manjaro 21.0.4 inosvika ichivandudza mapakeji, asi GNOME 40 haisi pakati pavo
Kdenlive's Kutaura-kune-Chinyorwa Turu Ichi ndicho chiitiko changu